Dalxiiska Jamaica wuxuu Tacsi u dirayaa Qoyska Sue McManus
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Dalxiiska Jamaica wuxuu Tacsi u dirayaa Qoyska Sue McManus
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dadka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Late Sue McManus, oo u ololeeya dalxiiska Jamaica
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett, ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qaraabadii iyo asxaabtii halyeeyga u ahaa dalxiiska, Sue McManus, oo dhowaan ku geeriyooday Mareykanka.
Sue waxay ka gudubtay baaqii waajibaadka ahaa inay kor u qaaddo Meesha Jamaica waxayna ka ciyaartay kaalin muhiim ah dhiirrigelinta meelaha loo dalxiis tago iyo soojiidashada jasiiradda oo dhan.
McManus wuxuu yeeshay sumcad xoog leh oo ah khabiir ku xeel dheer xiriirka dadweynaha ee warshadaha dalxiiska.
Waxay la shaqaysay dhowr shirkadood oo hogaamiya xiriirka dadweynaha ee caalamiga ah kuwaas oo si dhow ula shaqeeyay Guddiga Dalxiiska ee Jamaica si kor loogu qaado Jadwalka Jamaica.
“Aad baan uga xumahay geerida Sue McManus. Runtii waxay ahayd qof ku adag qaybta dalxiiska oo dhaafsiisay baaqii waajibka ahaa si kor loogu qaado Jadwalka Jamaica. Waxay kaalin muhiim ah ka qaadatay dhiirrigelinta goobo -dalxiisyo iyo soo jiidasho badan oo ku baahsan dhererka iyo ballaarinta jasiiradda, taas oo gacan ka geysan lahayd qulqulka xiisaha leh ee soo -booqdayaasha ku aaddan meeshii aan ku soconnay tobannaankii sano, ”ayuu yiri Bartlett.
“Anigoo ku hadlaya magaca Dowladda iyo dadka Jamaica, oo ay ku jiraan dhammaanteen bahda dalxiiska, waxaan jeclaan lahaa inaan tacsi tiiraanyo leh u diro eheladii iyo asxaabtii Marwo McManus. Waxaan si kal iyo laab ah u rajaynaynaa in Rabbi idin wada siiyo raaxada aad u baahan doontaan si aad u samirtaan muddadan murugada ah oo nafteedu ay nabad ku nasato, ”ayuu wasiirku raaciyay.
McManus, oo u soo guuray Jamaica kana yimid Boqortooyada Ingiriiska dhowr iyo toban sano ka hor, wuxuu yeeshay sumcad xoog leh oo ah khabiir ku xeel dheer xiriirka warshadaha dalxiiska. Waxay la shaqaysay dhowr shirkadood oo hoggaaminayey xiriirka dadweynaha ee caalamiga ah kuwaas oo si dhow ula shaqeeyay Guddiga Dalxiiska Jamaica si kor loogu qaado Joogitaanka Jamaica sannadihii 1980 -meeyadii iyo 1990 -meeyadii.
Waxaa lagu yaqaanaa tamarteeda iyo xamaasadeeda, Ms. McManus waxay kaloo gacan ka geysatay suuqgeynta guryaha kala duwan oo ay ku jiraan meelaha lagu nasto ee SuperClubs.
“Ma aha oo kaliya inay Jamaica ka dhigtay hoygeeda, laakiin waxay sidoo kale nolosheeda inteeda badan u hibeysay inay gacan ka geysato kor u qaadista badeecadeena dalxiiska iyo dhismaha Brand Jamaica. Runtii waxay ahayd xirfadle run ah waxaana aad u tebi doona dhammaan qoyska dalxiiska, ”ayuu yiri Bartlett.
Oktoobar 21, 2021 at 01: 37